Thursday March 07, 2019 - 11:42:16 in Wararka by
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas'uuliyadda qarax aad u xooggan oo ka dhacay mid kamida Kontaroollada laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Al Shabaab waxay sheegtay in ciidamadeedu ay ku guuleysteen weeraridda Kontaroolka Koowaad ee madaxtooyada islamarkaana uu weerarkaas sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
"Mujaahidiinta ayaa qarax ku beegsaday mid kamida Koontaroollada madaxtooyada Kooxda Ridada waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo gaaray ciidamadii murtadiinta ee goobta ku sugnaa" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ku dhowaad 10 askari oo kamid ahaa ciidamada ilaalada madaxtooyada ay ku dhinteen qaraxii maanta halka kuwa kale ay dhaawacyo soo gaareen, wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxu uu ka dhashay gaari balse faah faahin intaas ka baxsan lagama hayo.
Qaraxan ayaa imaanaya 7 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu beegsaday dhismaha Hoteelka Makka Al Mukarrama weerarkaas oo gallaaftay nolosha in kabadan 40 qof, waxaa muuqata in ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan xayndaabka dowladda Federaalka uu faraha kasii baxayo.